Global Voices teny Malagasy » Fanentanana An-Tserasera Ho Fikarohana Ireo Mpanoratra Tononkalo Tany Am-ponja Tsy Fanta-Tompo Nandritra Ny Fitondrana Jadona Tany Arzantina · Global Voices teny Malagasy » Print
Fanentanana An-Tserasera Ho Fikarohana Ireo Mpanoratra Tononkalo Tany Am-ponja Tsy Fanta-Tompo Nandritra Ny Fitondrana Jadona Tany Arzantina
Voadika ny 24 Jona 2016 13:11 GMT 1	 · Mpanoratra Erin Gallagher Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Amerika Latina, Arzantina, Ady & Fifandirana, Hafanàm-po nomerika, Haisoratra, Mediam-bahoaka
Ireo pejin'ny kahie Rawson. Nahazoana alàlana avy amin'ny Archivo Provincial de la Memoria del Chubut (Tahirim-paritany Fahatsiarovana an'i Chubut)
Nanamarika ny vanim-potoana maizina tamin'ny tantaran'ny Arzantina ny Ady Maloto  nandritra ny taona 1974 ka hatramin'ny 1983 izay namoizana ain'olona teo ho eo amin'ny 30.000 teo. An'aliny ny olon-tsotra no nalaina an-keriny, nogadraina, nampijalijalina, ary novonoina. Niharan'ny habibian'ny andiana miaramila mpamono olona avokoa ireo izay rehetra naneho ny tsy fitovian-kevitra na dia ny kely indrindra tamin'ny didy jadon'ny elatra havanana – na mpiasa, na mpianatra, mpampianatra, mpanao gazety, na mpikatroka.
Nandray olom-pirenena Arzantina ireo foibe famonjana an-tsokosoko manerana ny firenena. Ny fonjan'i Rawson, fonja mitokana voambina indrindra ao amin'ny faritanin'ny Chubut, no iray amin'ireo toerana tena hipoka indrindra. Gadra politika teo ho eo amin'ny 10.000 ka hatramin'ny 12.000 teo no nandalo tao Rawson ny 1975 ka hatramin'ny 1984. Nilaza izany ho toby fitanana ara-dalàna  ireo gadra teo aloha izay niaina famonjana tao .
Tamin'ny 1983, nanome fampianarana tao an-tranomaizina i Hebe Mabel Garro, mpampianatra literatiora, ary nandao an'i Rawson niaraka tamin'ny kahie misy tononkalo nosoratan'ireo voafonja teo anelanelan'ny Aprily 1982 ka hatramin'ny Aogositra 1983 .Tsy misy anaran'ny mpanoratra avokoa ireo lahatsoratra .
Navoaka ireo tononkalo  ankehitriny 40 taona taorian'ny fanonganam-panjakana. Nisy mpihaino ihany ny farany ny feon'ireo mpanoratra , kanefa tsy mbola manana anarana izy ireo. Nandefa ny #CuadernodeRawson  (kahie Rawson) fanentanana hitadiavana ireo mpanoratra ôrizinaly ny Cosecha Roja  (Voa Mena), tambajotra ara-dalànan'ny fanaovan-gazety sady fikambanana mpiaro ny zon'olombelona.
Voarara ny fanoratana tao an-tranomaizina. Notapahan'ireo voafonja ny tsinain'ny pensilihazo, ary fonon-tsigara no nampiasainy mba hanoratana. Tafahoatra ny fefy hitamason'ny tranomaizina ny tononkalo noforonina tao Rawson; fijoroana vavolombelona mivantana izay manambara ny zavatra tsy azo ampitaina tamin'ny kabary tsotra.
Mitantara ny haizina, ny hanoanana, ny fahanginana, ary ny fahatezerana daholo ireo tononkalo. Misy ihany koa ny fahatsiarovana ny fahaverezana sy ny fanantenana. Ity ambany ity ohatra dia tononkalo iray antsoina hoe “Vamos andando” (Mandroso iIsika):
Por todos los chicos que sueñan y cantan
por todos los chicos que esperan
por los que recuerdan
por la mano tierna que busca una mano
y que no la encuentra
por los cuentos de hadas
que ya nadie cuenta
por los que interrogan en cada mirada
a la vieja abuela
a la dulce hermana
por los que conversan con mama en secreto
u le inventan juegos
por los que recorren semana a semana
de muros hostiles, de gestos extraños
con una sonrisa que tiembla en los labios
y aplastan la ñata contra un vidrio helado
por todos los chicos que buscan
de noche una estrella
en el alto cielo
por todos ustedes seguimos andando
Ho an'ny ankizy rehetra izay manonofy sy mihira
ho an'ny ankizy rehetra izay miandry
ho an'ireo izay mahatsiaro
ho an'ny tanana malefaka mitady tanana [hamonjy]
ka tsy mahita izany
ho an'ny angano
izay tsy misy mitantara intsony
ho an'ireo izay manontany isaky ny indray mipi-maso
ny renibe efa antitra
ny anabavy tsara fanahy
ho an'ireo izay miresaka amin-dreniny ao amin'ny miafina
ary mamorona lalao tahaka ny hoe eo izy
ho an'ireo izay mirenireny isan-kerinandro
amin'ny manda fahavalo, hafahafa fihetsika
miaraka amin'ny tsiky izay mangovitra eo amin'ny molony
ary ny hoditra maratra
mihosotra sy mifotetaka amin'ny fitaratra mivaingana
ho an'ny ankizy rehetra izay mitady
ny kintana amin'ny alina
eny amin'ny lanitra avo
ny fiposahan'ny masoandro
ho anareo rehetra miroso hatrany isika
Nivoaka ivelan'ny [fonja] Rawson U6 ilay kahie miha-mavo ahitana soratra maromaro nitsonika tamin'ny pejy manana takelaka 84. Misy sary sambo ambony rano ny fonony.
Mila ny anaran'ireo mpanoratra azy tany am-boalohany ireo tononkalo valo ambin'ny folo tsy misy anarana. Manantena i Cosecha Roja fa hitondra famadihana ny pejin'ny amin'ny vanim-potoana mangirifiry tamin'ny tantaran'ny Arzantina ny famantarana ireo poety tao Rawson. Raha iray amin'ny mpanoratra ireo lahatsoratra ianao na mahalala ny iray amin'izy ireo, dia miangavy anao mba hifandray amin'ny info.cosecharoja@gmail.com sy centrocultural.dhchubut@gmail.com.
Cuaderno de Rawson 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/24/84465/
 Ady Maloto: https://en.wikipedia.org/wiki/Dirty_War
 toby fitanana ara-dalàna: http://pagina%2012%20http//www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-89961-2007-08-19.html
 Navoaka ireo tononkalo: http://cosecharoja.org/poemas-escritos-por-presos-de-la-dictadura-buscan-sus-autores/
 Cuaderno de Rawson: https://www.scribd.com/doc/316471238/Cuaderno-de-Rawson